कपाल र नङ काट्दा किन दुख्दैन ? यस्ता छन् कारणहरू ! | सुदुरपश्चिम खबर
कपाल र नङ काट्दा किन दुख्दैन ? यस्ता छन् कारणहरू !
तपाईंले याद गर्नुभएको होला, बढेको नङ काट्दा मात्र पीडा नहुने हो तर छालासँग टाँसिएको नङमा चोट लागेमा वा भाँचिएमा पीडा हुन्छ ।
पूरै नङ मृत कोशिकाबाट नबनेको बरू बढेका नङ मात्र मृत कोशिकाबाट बनेका हुनाले नदुखेको हो । छालासँग जोडिएका नङ चाहिँ जीवित कोशिकाबाट बनेको हुनाले त्यसमा चोट लाग्दा हामीलाई दुख्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ःधर्म शास्त्रका अनुसार कलियुगको आयू अब कति ?ःधर्म शास्त्र अनुसार ब्रह्माण्डमा चार युग रेहका छन् । जसमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग पर्छन् ।हिन्दु शास्त्रका अनुसार चार मध्येको अन्तिम कलि युग हो । यो युगमा मानिसहरुको चरित्र बिग्रने, सभ्यताको नाममा नयाँ समस्याहरु जन्मने भनेर शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
कलियुगको आरम्भः१२ सय दिव्य वर्षको एक कलियुग मानिएको छ । कलियुग चौथो युग हो । शास्त्रहरुका अनुसार महाभारत युद्ध ३१३७ ईसा पूर्वमा भएको थियो । कृष्णको यो युद्धको ३५ वर्षपछि देहान्त भएको थियो, जसपछि कलियुगको आरम्भ भएको विश्वास लिइन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ःनायिका बर्षा शिवाकोटीको आ,क्रोश,सधै आ,न्दोलन गर्नु साटो भागरथीको न्या,यको लागी मिलेर ल,डौ, (भिडियो सहित)ःनायिका बर्षा शिवाकोटीले भागरथीको न्या,यकोलागी आफ्नो भावना राखेकी छिन तर उनले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि ब्य,ङग यसरि गरेकी छिन । हेरौ उनको स्टाटस जस्ताको तस्तै “नारीलाई भगवान मानेर पूज्ने मेरो देशमा आज नारी स्वयं सुरक्षित छैनन्। निर्मला र सम्झना जस्तै भागीरथीले पनि न्या,य पाउँदिनन् त ?
के यति अ,सक्षम छ हाम्रो न्यायपालिका ? के यति क,म्जोर छ हाम्रो राज्य व्यवस्था, एउटा अप,राधिको पहिचन गरि, सजाय दिन नसक्ने ? के गरीबका लागि न्या,य त्यति महँगो भइसक्यो ?
तिम्रो र्यालीमा आएका जति मानिसले मेरा बहिनीहरुको लागि न्याय मागिदिएस फेरी अर्की बहिनी बल,त्कृत हुन्न थिइन् कि? तिम्रो आन्दोलनको नारा यदी बल,त्कार र बल,त्कारीको विरू,द्धमा लाग्ने गरेको भए, सायद मेरी बहिनिको बल,त्कारीले सजाय पाउँथ्यो कि? हामी केका लागि ल,ड्दै छौँ ? हाम्रो माग के हुनपर्ने हो ?
नारा के हुनपर्ने हो ? आफै विचार गरौँ।अप,राधीको मनोबल झन बलियो बन्दै छ । पी,डित अझै पीँ,डामै छन्। जनताको सरकार र संविधानबाट भरोसा उठ्ने बेला भइसक्यो। र देश झन झन अ,स्थिरता तर्फ जाँदैछ। कुर्सीको ल,डाइँ छोड, सत्यको लागि ल,ड, जनाताको पक्षमा ल,ड ,जीत तिम्रै हुनेछ । न्या,य दिन अझ वि,लम्ब नहोस ।
यो पनि पढ्नुहोस् : भोलि माघ ३० गते नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय !!ःसरकारले माघ ३० गते शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले सोनाम ल्होछारको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेकोछ ।
नेपाल तामाङ घेदुङले सरकारसँग पटकपटक सोनाम ल्होछारमा बिदा दिन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। सरकारले केही वर्ष अघिसम्म सोनाम ल्होछारमा बिदा दिए पनि पछिल्ला वर्षमा बिदा कटौती भएको थियो।
यसअघि सरकारले कार्यदिन बढाउन भन्दै ल्होछार, माघे संक्रान्ति लगायतका चाड पर्वको बिदा कटौती गरेको थियो । तर संसद विघटनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सरकारले यी चाड पर्वहरुमा फेरि सार्वजनिक बिदा दिन लागेको छ । यसअघि माघे संक्रान्तिको दिन पनि सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । तर पुस १५ मा मनाइएको तमु ल्होसारको दिन भने सरकारले सम्बन्धित जाती समुदायलाई मात्रै विदा दिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् ःपुदिनाको सेवन गर्नाले हुन्छन् यी फाइदाहरु !!ःपुदिनाको सेवनाले सबैभन्दा फाइदा हाम्रो पेटलाई पुग्छ । पेटमा भएका विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न पुदिना निकै लाभदायी हुन्छ । मसलेदार खाना खाएपछि पुदिना सेवन गर्दा निकै फाइदा पुग्ने गर्छ । यसको सेवनले वान्ता हुनबाट पनि रोक्छ ।
हैजा लागेका व्यक्तिलाई पनि पुदिनाको रस र प्याजको रस मिसाएर दिँदा निकै फाइदा गर्छ । पुदिनालाई मनतातो पानीमा नुन मिसाएर कुल्ला गर्दा घाँटीमा भएको समस्या हल हुन्छ, यसले आवाजलाई पनि प्रष्ट बनाउन सहयोग गर्छ ।तर, पुदिनाको सेवन अत्यधिक भने गर्नु हुँदैन । यसले हाम्रो आँतलाई समस्यामा पार्न सक्छ ।
नमस्कार गर्नुको कारण र महत्व : आखिर किन गरिन्छ नमस्कार ?
एक वर्षपछि सञ्चालनमा जोमसोम-पोखरा हवाइ सेवा !!
मेवा खाँदा हुने फाइदाहरू !!
शास्त्र अनुसार कुन काम कुन वार गर्दा लाभदाइक र शुभ हुन्छ ?